Iqhosha lokuqhina umatshini abavelisi kunye nabaxhasi | Iqhosha lase China lokuQhoboshela Umatshini weFektri yeFektri
Ukhuseleko lweeNtloko ezintathu iQhosha leMoya eliQhobosha uMatshini MAX-SQ3-100
Isicelo sebhatyi yehempe yenkwenkwe kunye nezinye iintlobo zempahla, iminqwazi, njl. Iimpawu: Lo matshini unokufakwa kwiiseti ezintathu zomngundo ukuze usebenze, ukungunda omnye ukubetha imingxunya kwilaphu, ezinye izinto ezimbini zokubumba amaqhosha, umsebenzi akadingi ukutshintsha ukungunda, okuya konga ixesha kwaye kwandise iiparameter zobuGcisa. Umzekelo: MAX-SQ3-100 Working Voltage: AC220V Working Pressure ： 0.15-0.8MPA Attaching Button Pressure ： 150-650KG, adjustable, Stamping time: 0.1-9.99, adjustable） M ...
Iqhosha leServo leQhosha leMoto eliDibanisa iMax-M838
Iimpawu 1. Umatshini omnye unokusebenzisa iiseti ze-3 ezahlukeneyo zokubumba, ke oko kungunda kunokutshintshwa ngokulula, kwaye kufaneleke ngakumbi kwimveliso ngamaqela ambalwa kunye nezinye iintlobo. 2.Ukusebenzisa i-servo motor kunye ne-drive ekrelekrele kunokwenza umatshini ngokusebenza okuphezulu kunye nokonga umbane 3. Ukugxininiswa kwesikhunta esezantsi kunokulungiswa, okusombulula ngokupheleleyo imeko yeecres ezahlukeneyo ezikhoyo kwiindawo zoomatshini 4. Abasebenzi basebenza ngesixhobo sokhuseleko , ukukhanya kunye nendawo ye-laser ...
Iqhosha le-Electromagnetic lokuQhobosha umatshini MAX-DZ-1
Isicelo sebhatyi yehempe yenkwenkwe kunye nezinye iintlobo zempahla, iminqwazi, njl. Iimpawu 1.Ukhuseleko oluphezulu; Umgangatho ophezulu kunye nokusebenza okuphezulu; 3.Ukusindisa umbane; Ukusetyenziswa kwexabiso eliphantsi. Umzekelo weParameter yobuGcisa: I-MAX-DZ-1 Voltage: AC200-240V Uxinzelelo: 50-800kg Ixesha lokumisela: 50 （iziqwenga / umzuzu size Ubungakanani bokupakisha: 510X610X300 (mm) NW / GW: 21/23
Umatshini wokuqhobosha amaqhosha MAX-QL-1
Isicelo sebhatyi yehempe yenkwenkwe kunye nezinye iintlobo zempahla, iminqwazi, njl. Iimpawu 1.Umdibaniso woyilo nkqo, ukonga iindleko 2.Ukuphakanyiswa kwesilinda somoya esininzi, ngoxinzelelo olukhulu lwe-3.Scratch kunye nokubumba kwefom esisigxina, ukulungelelanisa okunamandla, ukulungeleka nokukhawuleza. Imodeli yeParameter yobuGcisa: I-MAX-QL-1 Voltage: Uxinzelelo lwe-220V: 100-930kg Ixesha lokulungisa: 30 （/ iziqwengana / size Ubungakanani bokupakisha: 600X600X1360 (mm) NW / GW: 50/70
Umatshini wokuqhobosha amaqhosha MAX-DF-1
Isicelo sebhatyi yehempe yenkwenkwe kunye nezinye iintlobo zempahla, iminqwazi, njl. Iimpawu 1.Ukungeniswa koyilo nkqo, ukonga iindleko; 2.I-superposition yesilinda yomoya emininzi, enoxinzelelo olukhulu lwe-3.Scratch kunye nokubumba kwefom esisigxina, ukulungelelanisa okunamandla, ukulungele kunye nokukhawuleza. Imodeli yeParameter yobuGcisa: I-MAX-DF-1 Voltage: Uxinzelelo lwe-220V: 100-930kg Ixesha lokulungisa: ama-30 （/ iminithi, Ubungakanani bokupakisha: 600X600X1360 NW / GW: 50/70